– August 4, 2014Posted in: Myanmar မြန်မာ, ရွေရတုဆောင်းပါးများ
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် သံသရာဝဲသြဃရေအယဉ်တွင် မျောလွင့်နေကြရသော သတ္တဝါအနန္တတို့ကို ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလတိုင်အောင် ပါရမီတော်တို့ကို ဖြည့်ဆည်းပူးတော်မူပြီး လောကတွင် ထင်ရှားရှိပါလျက် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသော အမှန်တရားသစ္စာတို့ကို ကိုယ်တော်တိုင် ဉာဏ်ဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်အောင် ကြိုးစားရှာဖွေ ဖော်ထုတ်တော် မူခဲ့၏။ ထိုသို့ အမှန်တရားကို သိမြင်တော်မူသောကြောင့် ကိုယ်တော်တိုင် သံသရာဝဲသြဃနယ်မှ လွတ်မြောက်တော်မူရ၏။ တစ်ဖန် မိမိထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသည့် အမှန်တရားတို့ကို သတ္တဝါဝေနေယျတို့ အားလည်း သိရှိနိုင်စေရန် နည်းလမ်းတို့ကို ညွန်ပြတော်မူ၏။
ထိုမြတ်ဗုဒ္ဓ ညွန်ပြသည့်နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးကြသည့် သတ္တဝါအနန္တတို့သည်လည်း အမှန်တရားကို သိမြင်၍ သံသရာဝဲသြဃနယ်မှ လွတ်မြောက်ကြရလေ၏။ ထိုမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အမှန်တရား သိမြင်ရေးနည်းလမ်းများကို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တပည့်သာဝက အဆက်ဆက်တို့သည် မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့ကြသည်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓ သက်တော်ထင်ရှားရှိရာကာလမှ ယနေ့ခေတ်ကာလ အချိန်တိုင်အောင် ဖြစ်၏။ ထိုသို့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့သူများတွင် ယခုရွှေရတုမွေးနေ့ရှင် အရှင်သုခမိန္ဒသည်လည်း တစ်ပါးအပါအဝင်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်၍ ဝမ်းမြောက်အနုမော် သာဓုခေါ်ပါ၏။ အရှင်သုခမိန္ဒအား ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခွင့် ရသူများကား အရတော်ပါပေစွ။
ထိုမြတ်ဗုဒ္ဓ ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူခဲ့သည့် အမှန်သစ္စာတရားးများကား နက်နဲ၏။ သိမ်မွေ့၏၊ သာမန်လူတို့ မြင်နိုင်သိနိုင်ခဲ၏။ ပညာဥာဏ်ကြီမားသူတို့၏ ကျက်စားရား ဖြစ်၏။ တွေးတော ကြံဆထားသော အကြောင်းအရာများ မဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် ထင်ရှားရှိသော သဘောတရားများ ဖြစ်၏ သိမြင်ဖို့ရာ ပါရမီပါ သူတို့သာ သိမြင်ခွင့်ရှိသော တရားများဖြစ်၏။
ဘုံသုံးပါး၌ ကျင်လည်ကုန်သော သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် ဆင်းရဲမှ လွတ်လိုကြ၏။ ထိုသို့ဆင်းရဲမှ လွတ်လိုသော ဆန္ဒရှိကြသော်လည်း လွတ်မြောက်ကြောင်းနည်းလမ်းကို မသိကြပေ။ နည်းလမ်းသိဖို့ အသာထား မိမိလွတ်မြောက်လိုသည့် ဆင်းရဲအစစ်အမှန်နှင့် ထိုဆင်းရဲ၏ နယ်ပယ်ကိုပင် မသိရှိဘဲ ဖြစ်နေကြ၏။ ထိုသို့သတ္တဝါများ မသိရှိသည့် ဆင်းရဲအစစ်အမှန်နှင့် ဆင်းရဲ၏နယ်ပယ်၊ ထိုမှ လွတ်မြောက် ကြောင်းနည်းလမ်းတို့ကို မြတ်ဗုဒ္ဓက ထုတ်ဖော်လမ်းညွန်တော်မူထား၏။
လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါ အများစုတို့သည် မိမိတို့ ရရှိထားသည့် ဘဝခန္ဓာ၏ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှု၊ သက်ရှိသက်မဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့၏ ပြည့်စုံမှုကို ချမ်းသာဟု မှတ်ယူထားကြ၏။ ထို့ကြောင့်ပင် ထိုလူ့ဘဝ နတ်ဘဝ ဗြဟ္မာဘဝ နှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပြည့်စုံမှုကို လိုလားတောင့်တကြ၏၊ ရရှိရန် အားထုတ်ကြ၏။ ဤနည်းဤပုံဖြင့် ဘဝခန္ဓာ သံသရာရေအယဉ်ကြောဝယ် စုံဆန်မျောနေကြရပေ၏ ဤသည်ကို ဆင်းရဲဒုက္ခ မထင်မှတ်ကြပေ။ ထိုသို့မထင် မှတ်နိုင်အောင် ဖြစ်ကြရသည်မှာ အတိတ်ဘဝသံသရာတစ်ကြောဝယ် ဦးဆောင်ချုပ်ကိုင်လာသည့် မသိမှု အဝိဇ္ဇာတရား၏ ဖုံးအုပ်ခံထားရသောကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓက ထိုသတ္တဝါအများစု ချမ်းသာဟု ထင်မှတ်နေသည့် သတ္တဝါအားလုံး ရရှိထားသော ဘဝခန္ဓာနှင့် ထိုသတ္တဝါတို့ ကျင်လည်ရာ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ နယ်ပယ်အားလုံးကိုဆင်းရဲဒုက္ခ အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ထင်လင်းအောင် ထုတ်ဖော်ပြသတော်မူ၏။ ထိုဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းတို့ကိုလည်း တိကျအောင် ညွန်ပြတော်မူ၏။ ထိုနည်းလမ်းကောင်းတို့သည် သာသနာတော် သက်တမ်း နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော် ကာလတိုင် ရောက်သော်လည်း သူတော်ကောင်းအဆက်ဆက်တို့၏ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာမှုကြောင့် ယနေ့တိုင်အောင် မပျောက်ပျက်သေးပေ။ ဤသည်မှာ သံသရာဝဋ် သြဃညွတ်မှ အမှန်လွတ်လိုသူ၊ ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုသူတို့အဖို့ ကံကောင်းသည့် အခွင့်အရေးထူး တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်တွင်းကာလမှာ လူလာဖြစ်ခွင့်ရသည့် အကျိုးကျေးဇူးဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ၏။ ထိုအခွင့်အရေးကို ရအောင်ယူတတ်ဖို့ကား သံသရာခရီးသည်ဖြစ်သော မိမိတို့၏တာဝန်သာ ဖြစ်၏။ ထိုအခွင့်အရေးမျိုး လက်မလွတ်သင့်ကြောင်းကိုလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓက သတ္တိသတသုတ္တန်ဖြင့် အလေးအနက် တိုက်တွန်းတော်မူထားပါ၏။
သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်သော အမှန်သစ္စာတရားကို သိအောင် လုပ်ပေနိုင်သူ တစ်စုံတစ်ဦးက အမောင်……….. ။ အသင်သည် နံနက်အချိန်မှာ အကြိမ်တစ်ရာ နေ့လည်အချိန်မှာ အကြိမ် တစ်ရာ၊ ညနေအချိန်မှာ အကြိမ်တစ်ရာ ချွန်ထက်သောလှံဖြင့် အထိုးခံနိုင်မည်ဆိုလျှင် အမှန်သစ္စာတရားကို သင်သိအောင်လုပ်ပေးမည်။ အမောင်………အဲ.ဒီလို လှံဖြင့် အထိုးခံနိုင်ပါ့မလား-ဟု မေးလာလျှင် အမှန်သစ္စာတရားကိုသာ သိရမည်ဆိုပါက သင်ဘာမှ အထွေအထူး တွေးတောစဉ်းစားမနေနှင့် အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ မြန်မြန်သာ သွားပြီး၊ အထိုးခံလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မျောခဲ့ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ အတိတ်ဘဝသံသရာမှာ ဘယ်အမှန်သစ္စာကိုမှ မသိရတဲ့ အခုလို လှံအထိုးခံရပြီး အကျိုးမရှိ သေခဲ့ရတဲ့ ဘဝတွေက မရေတွက်နိုင်အောင် များခဲ့ပြီ၊ အခု လှံဖြင့် အထိုးခံပြီး သေရမှာက အမှန်သစ္စာကို သိပြီးအကျိုးရှိရှိ သေရတာ ဖြစ်လို့ပါပဲ… ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဤသို့မြတ်ဗုဒ္ဓ တိုက်တွန်းတော်မူရခြင်းမှာ အမှန်သစ္စာတရား သိရှိဖို့အရေးနှင့် သစ္စာတရားကို သိအောင် ညွန်ပြနိုင်သူနှင့် တွေ့ကြံဖို့အရေးမှာ အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုခဲ့ပြီးသော သုတ္တန်ဒေသနာတော်ကို နှလုံးမူအလေးထားပြီး နယ်သူနယ်သား သူတော်စင်များအနေဖြင့်လည်း လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆုံးမထားသည့်……….-
-ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်လျှင် အမိုက်နင့်ပြင်ရှိသေးလေလိမ့်လား၊
-ခွင့်သာဆဲမှ မခဲချင်လျှင် အလွဲနင့်ပြင်ရှိသေးလေလိမ့်လား၊
-ခွင့်သာတုန်းမှ မရုန်းချင်လျှင် အရှံးနင့်ပြင်ရှိသေးလေလိမ့်လား၊
မဖြစ်ရလေအောင် အမှန်သစ္စာတရား ညွန်ကြားပြသနိုင်သည့် ဆရာများနှင့် အခွင့်ကြုံခိုက် လုံ့လစိုက်ပြီး ဝိပဿနာတရားအလုပ်များ ပွားများအားထုတ်သင့်ကြကြောင်း ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းအပ်ပါ၏။
ဤစာစုဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပရိယတ် ပဋိပတ် နှစ်ရပ်သာသနာ ပြန့်ပွားရာ ပြန့်ပွားကြောင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေသော ရွှေရတုမွေးနေ့ရှင် အရှင်သုခမိန္ဒအား ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာနှင့် ဘာသာအကျိုးကို ဆထက်တိုးကာ သည်ပိုးနိုင်ပါစေဟု ဆုတောင်းမေတ္တာပတ္တနာ ပြုလိုက်ပါ၏။
ပေဿယျံ တံ ဝဿသတံ အာရောဂျံ။
န. ပ. သ၊ ရန်ကုန်။